Booliiska Uganda oo Soomaali u xiray Qaraxyo lagu qabtay Hoteel uu tagi rabo Museveni. | Dayniile.com
Home Warkii Booliiska Uganda oo Soomaali u xiray Qaraxyo lagu qabtay Hoteel uu tagi...
Booliiska Uganda oo Soomaali u xiray Qaraxyo lagu qabtay Hoteel uu tagi rabo Museveni.
Booliska Uganda oo wada howlgallo kaddib qaraxyadii toddobaad kahor ka dhacay dalkaas ayaa sheegay in ay xireen afar qof oo Soomaali ah oo ku eedeysan “walxaha qarxa oo ay geeyeen hotel lagu wado in uu todobaadkaan tago Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni”.
Afhayeenka BoolIiska Uganda Fred Enanga ayaa sheegay in walxha qarxa lagu qabtay baaris lagu sameeyey baabuur yaallay hotel-ka Speke Munyonyo, maadaama ciidanku ay ka feejigan yihiin qaraxyada ka dhacay Kampala.
“Kooxda wada-jirka ah ee ka hortagga argagixisanimada waxay gacanta ku hayaan afar qof Soomaali ah” waxaa sidaas yiri Afhayeenka Booliiska Uganda Fred Enanga oo la hadlay wakaaladda wararka AFP.
Hotelkaan caanka ah oo horey u marti-geliyey kulan madaxeedyo ayaa lagu wadaa in Khamiista berri ah (25ka November 2021) in lagu qabto kulanka Golaha Wasiirada oo uu Guddoominayo madaxweyne Yoweri Museveni.
Booliiska Uganda ayaa adkeeyey amniga dalkaas toddobaadyadii tegay kaddib markii Uganda ay wajahday weeraro dhowr ah oo dhimasho leh oo uu ku jiro weerar is-miidaamin ah oo dhacay toddobaadkii tegay kaasi oo ay sheegatay kooxda Daacish.
Labada qarax oo isku xigay ayaa dhacay daqiiqado gudahood, waxaana fuliyey laba qof oo is-miidaamiyey oo watay mootada loo yaqaan “Boda-Boda” iyaga oo beegsaday meel u dhow saldhigga booliska iyo xarunta Baarlamaanka ee Magaalada Kampala.
Qaraxyada ayaa daba socday laba qarax oo dhacay October, mid waxaa lala beegsaday bas marayey meel u dhow Kampala oo ay dhowr qof ku dhaawacmeen, halka kan kale uu ka dhacay maqaayad ku taalla caasimadda oo Haweeney ay ku geeriyootay.
Booliiska ayaa qaaday tallaabo ka dhan ah kooxda weerarka sheegatay ee ADF loosoo gaabiyo, ciidanka ayaa toogtay mid kamid ah wadaada caanka ah ee Uganda oo ay ku eedeeyeen in uu xubin ka yahay Kooxdaas.
Uganda ayaa sidoo kale ADF ku eedeysay qarax la fashiliyey oo bishii August lala beegsan lahaa tacsida Jeneraal lagu naaneysi jiray “Libaaxa Muqdisho” oo Al-Shabaab kula dagaalamay Magaalada Muqdisho.
Kooxda aadka looga cabsado ee ADFoo ah koox mucaarad ah oo taraiikh fog ku leh Uganda ayaa lagu eedeeyey dilka kumanaan qof oo ahaa shacab ku nool bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo.
Kaniisadda Katooliga ee Congo ayaa sheegtay in ADF ay dileen qiyaasti 6,000 oo qof tan iyo 2013-tii oo kooxdaan ay joogteysay weerarada ay ka geysanayo Dalkaas.
Previous articleTahriibayaal ku geeriyooday marin biyoodka u dhaxeeya Ingiriiska & Faransiiska
Next articleDEG DEG: QARAX WEYN OO KA DHACAY MOQDISHU
Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa cambaareeeyay weerarkii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale Qaramada Midoobey ay tacsi u dirtay eheladii dadkii ku...
Raiisul Wasaare Rooble oo kullan oa yeeshay Saraakiisha Hay’adda Socdaalka &...
Dowladda Ciraaq oo gacanta ku dhigtay in horay Madaxiisa lacag loo...